Uma kuziwa endabeni yokuqomisana online, profile yakho dating kubalulekile. Kufanele siqinisekise uke kuhlanganise yonke imininingwane ebalulekile mayelana wena kodwa nawe ufuna ukuligcina fresh and ezithakazelisayo. Phela, ungenalo ofuna ugqame!
Nanka amanye amasu kulokho ukugwema Ukuthumela kwi profile yakho ukuphola online:
Bad / Inappropriate ifotho
Asivume-lokuqala Okwasihlaba umxhwele konke futhi uma sephrofayela yakho isithombe ngawe shotgunning ubhiya noma phezulu off the ikhamera, ungase ukugwema dates abangahle. Ngisho noma ukhetha isithombe ezifanele more, zama ngokugwema izithombe kukhona ukufiphala, ukuthi kukhona ikude ukuthi awukwazi ukubona ubuso bakho noma nawe ugqoke izibuko. A photo okulula umoyizela ngempela izimangaliso.
Lupelomagama Frequent and Grammar Amaphutha
Akuwona wonke umuntu kuyinto pro lolimi futhi lokho ngokuphelele emihle. Nokho, uma profile yakho enezinto sipelingi kanye neluhlelo lwelulwimi amaphutha, Abantu kungenzeka betshakadula by profile yakho ngaphandle umcabango wesibili. Gijimani a kokupela eyisisekelo ngokusebenzisa profile yakho ukubamba amaphutha ezinkulu. I futhi uzoba basikisela hhayi usebenzisa umbhalo izifinyezo kanye lingo (njengokuthi "ur" esikhundleni "wakho" noma "bc" esikhundleni "ngoba") njengoba yakho ufuna profile yakho ukuba njengoba ecacile sikubeke ngangokunokwenzeka.
Ukushaywa Like Wonke Else
Amathani abantu abathanda ukufunda, travel, ukuya movie, umzimba futhi uphume eyodla. Uma unothando ngempela ngezinto ezithile, like kokuhamba, kabanzi more on kungani uluthanda, lapho bebelokhu futhi lapho ufuna ukuya. Kungasenza abe yokuqala ingxoxo uma uhlinzeke ngemininingwane kancane more. Ungazama futhi ukhuluma ngezinto more unique ngawe. Hey, ngeke wazi ukuthi ngubani omunye angase athande amakilasi zobumba noma spelunking!
Ukuqamba About Small Details
It kuyaqondakala ukuthi ufuna sikhangise izici yakho best on profile yakho kodwa amanga mayelana nemininingwane eqondene, ngisho abancane, kubi. Amanga mayelana ukuphakama yakho, isisindo sakho noma ngisho iminyaka yakho kungenzeka kubonakale like a deal enkulu ekuqaleni, kodwa uma ekugcineni uhlangana ne date nawe wahlangana online, zingase zithathwe singalindele futhi baqale ukuzibuza ukuthi yini enye amanga mayelana. Ukwethembeka inqubomgomo umhlabeleli.
Ukukhuluma Too Little noma Too Much
Akekho ofuna ukufunda inoveli iDemo uma ufunda dating profile online. Uma amaphrofayli made kakhulu, Abantu abaningi bavame bacishe bese uchofoza kwi profile elilandelayo. The Kungashiwo okufanayo for amaphrofayli ukuthi mafushane kakhulu. A profile imininingwane wena imisho eyodwa noma ezimbili kungakwenza ubukeke awazikhathaleli. Ukuthola medium ephelele phakathi amabili key, kanjalo ugcine iphrofayela yakho okuningiliziwe kanye iphuzu.